Vaovao - Miakatra ny katsaka manta, mampiakatra ny vidin-javatra tsirairay ny mpamokatra, ary ny tsenan'ny fitsambikina lysine sy threonine
Miakatra ny katsaka manta, mampiakatra ny vidin-javatra tsirairay ny mpamokatra, ary ny tsenan'ny fitsambikina lysine sy threonine
Taorian'ny Fetin'ny Fararano-fararano sy ny Fetim-pirenena dia nisondrotra ny vidin'ny katsaka ary ny vidin'ny fividianana toerana dia nihoatra ny 2.600 yuan / taonina, avo efa-taona. Voakasiky ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny orinasa lisisy sy threonine dia nanangana ny teny naterak'izy ireo tato ho ato. Ny tsena lysine sy threonine dia nofaoka taloha, ary nitsambikina kokoa izy io. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny lisisy 98% dia 7.7-8 yuan / kg, ary ny vidin'ny lisisy 70% dia 4,5-4.8 yuan / kg. Ny tsenan'ny threonine Ny vidiny dia 8.8-9,2 yuan / kg.
Ny tsenan-katsaka manta dia "maniry mafy"
Rivodoza telo misesy nisesisesy ny katsaka tamin'ity taona ity. Ny trano fandraisam-bahiny lehibe dia niteraka fahasahiranana tamin'ny fijinjana katsaka. Ny fandrosoana miadana amin'ny lisitra katsaka vaovao sy ny fanantenana an-tsena matanjaka. Niakatra ny vidin'ny fakana voam-bary ny orinasa any ambany. Tsy nety nivarotra ireo mpamboly ambony. Niakatra ny tsenan'ny katsaka tamin'ny Oktobra. , Tamin'ny 19 Oktobra, ny vidin'ny katsaka an-trano dia 2387 yuan / taonina, niakatra 5,74% isam-bolana ary 31,36% isan-taona. Ny vidin'ny salohim-katsaka dia nitombo tamin'ny 220 yuan isan-taonina tamin'ny fiandohan'ity taona ity ka lasa 2.900 yuan isan-taonina tamin'ity herinandro ity, fiakarana mihoatra ny 30%. Mandritra izany fotoana izany, ny fiakarana haingana dia nampitombo ny risika hiantsoana indray ny tsena, fa ny vidiny kosa mijanona ambony. Vao tsy ela akory izay, ny vidin'ny akora dia nisondrotra ary sarotra ny mividy, ary ny fihenan'ny vidin'ny orinasam-pikarohana lalina any ambany dia nitombo be. Nanaraka haingana izy ireo ary nanangana ny teny nindramina.
Mitombo hatrany ny fahafahan'ny famokarana kisoa eto an-toerana
Mitombo ny fangatahana ao an-trano. Vao tsy ela akory izay, ny mpitondra tenin'ny National Bureau of Statistics dia nilaza fa tamin'ny faran'ny telovolana fahatelo dia 37,39 tapitrisa ny isan'ny kisoa velona, ​​fitomboana 20,7% isan-taona; eo amin'izy ireo, ny isan'ny famafazana dia 38,22 tapitrisa, fitomboana 28,0%. Ny angon-drakitra navoakan'ny Fikambanan'ny Indostria Fahanana dia afaka mahita ihany koa ny famerenana amin'ny laoniny ny fahafahan'ny famokarana kisoa. Tamin'ny volana septambra, ny vokatra famokarana kisoa dia 8,61 tapitrisa taonina, fiakarana 14,8% isam-bolana ary fiakarany 53,7% isan-taona. Tao anatin'ny 9 volana lasa, ny vokatra famokarana kisoa isam-bolana dia nitombo isam-bolana afa-tsy ny volana Janoary sy Mey; ary nitombo isan-taona nandritra ny 4 volana nisesy nanomboka ny volana Jona. Malemy ny fangatahana any amin'ny faritra ivelany, nihemotra indroa ny valanaretina satro-boninahitra vaovao tany Eropa sy Etazonia, ary nitotongana indray ny toekarena tamin'ny telovolana fahefatra ary nitsoboka faharoa.
Raha fintinina: mitombo ny fangatahana ao an-trano, malemy ny fangatahan'ny vahiny, avo ny vidin'ny katsaka eo am-piandohana, mihena ny habetsaky ny asidra amino manondrana, ny orinasa lisisy sy threonine sasany dia any amin'ny faritra mahantra. Ny orinasam-pamokarana asidra amine sy threonine dia sahirana amin'ny fijinjana voam-bary, ambany ny tahan'ny fandidiana, misongadina kokoa ny vidin'ny vidiny, matanjaka ny fihetsika, ny tsena dia tohanan'ny fiasa mahery, ny fanaraha-maso dia mila mitandrina ny katsaka tsena sy ny fiovana eo amin'ny taham-pahaizan'ny mpamokatra.
L-Threonine Pharm, Kilasy Sakafo L-Threonine, Sakafo biby, 73-32-5 L-Isoleucine, Farm kilasy L-Leucine, L-Valine 72-18-4,